Sidee loo codsadaa fiisada ardayda Jarmalka?
Qodobkaan, waxaan ku siin doonaa xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan sida loo helo fiisada ardayga Jarmalka ee loogu talagalay kuwa doonaya inay u aadaan Jarmalka arday ahaan. Jid ahaan, waa in la xusuusiyaa in marka lagu daro macluumaadka ku jira qodobkan, macluumaad kale iyo dukumiintiyo kale la codsan karo, sidoo kale booqo bogga qunsuliyada Jarmalka.
Iyadoo aan loo eegin sababta safarka, foomka dalabka waa in marka hore la buuxiyo fiisooyinka safarka Jarmalka. Waxaa loo baahan yahay in la isticmaalo qalinka madow oo lagu buuxiyo dhammaan meelaha banaan xarfaha waaweyn inta la buuxinayo foomka dalabka. Foomka dalabka fiisada Jarmalka ee la diyaariyey waxaa loo diraa xarunta arjiga oo ay weheliyaan qofka safraya iyo dukumiintiyada kale ee la codsado iyadoo loo eegayo sababta.
Fiisaha loo baahan yahay Jarmalka waa mid ka mid ah fiisooyinka looga baahan yahay waddamada Schengen, iyadoo ay ugu wacan tahay codsashada faraha oo la soo saaray 2014, dadku waa inay sidoo kale aadaan markay dalbanayaan. Maaddaama aan dooneyno inaan ku siino macluumaad ku saabsan faahfaahinta dalabka fiisaha ee ay ardaydu doonayaan inay ku helaan maqaalkeenna, waxaan ku siin doonnaa waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato cinwaanka Codsiga Visaha Ardayda ee Jarmalka.
Jarmalka Booqo Dukumiintiyada Visa ee Ardayda
Dukumiintiyada looga baahan yahay kuwa doonaya inay Jarmalka ku galaan fiisaha ardayga waxaa ka mid ah baasaboor, foom codsi iyo bayaan xisaabeed bangi. Hoos waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo cinwaan kasta ah.
Aqoonsiga baasaboorku waa inuu soconayaa ugu yaraan 3 bilood kadib marka fiisaha la aqbalo.
Waa in aan la iloobin in baasaboorka aad haysato uusan ka badnaan karin 10 sano ugu yaraanna 2 bog waa inay banaan yihiin.
Haddii aad codsaneysid baasaaboor cusub, waxaa lagaa doonayaa inaad horay u sii qaadato baasaboorkii hore. Intaas waxaa sii dheer, arjiga fiisada ardayga ee Jarmalka, bogga sawirka baasaboorkaaga iyo koobi fiisooyinka aad heshay 3-dii sano ee la soo dhaafay ayaa loo baahan yahay.
Foomka la codsaday waa in la buuxiyaa iyadoo fiiro gaar ah loo leeyahay faahfaahinta kor lagu soo sheegay.
Feejignaanta waxaa la siiyaa cinwaanka saxda ah iyo macluumaadka xiriirka.
Haddii ardayga fiisaha dalbanayaa uu ka yar yahay 18 sano, waalidkiis / waalidkeed waa inay buuxiyaan oo wada saxeexaan foomka.
2 35 × 45 mm sawir gacmeedyo ayaa lagu codsadaa foomka dalabka.
Bayaanka koontada bangiga
Codsaduhu waa inuu haystaa macluumaadka koontada bangiga isaga oo wakiil ka ah waana inay lacag ku jirtaa koontada.
Shahaadada ardayga oo leh saxiix qoyan ayaa looga baahan yahay dugsiga.
Qofkasta oo kayar 18 sano, magac ogolaansho ayaa laga codsanayaa hooyada iyo aabaha inta lagu gudajiro arjiga.
Mar labaad, kuwa kayar da'da 18, dukumiintiyada lagu go'aamiyay sida ku xusan kooxda shaqo ee waalidkood ayaa la weydiisanayaa, maadaama kharashyada ay bixin doonaan waalidkood.
Muunado saxeexa waalidka ayaa laga qaadaa.
Qofka fiiso helayo waa inuu keenaa koobi kaarka aqoonsiga, nuqul diiwaanka aqoonsiga, caymiska caafimaadka safarka.
Haddii aad dagi doontid hudheelka, macluumaadka boos celinta ayaa loo baahan yahay, haddii aad la degan tahay qof qaraabo ah, warqad casuumaad ayaa loo baahan yahay.
# Jarmalka Booqo Dukumiintiyada Visa ee Ardayda
# Foomka Codsiga
# Bayaanka koontada bangiga